प्लाष्टिक खाने किरा
Thu, Apr 19, 2018 | 21:07:28 NST
12:18 PM ( 12 months ago )
Total Views: K
वैशाख १२ – प्लाष्टिकको झोला खाने क्याटरपिलर अर्थात पुतली तथा भुसुनाको लार्भा (किरा) प्लाष्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि सहयोगी बन्ने वैज्ञानिकले बताएका छन् । बेलायतको क्यामब्रिज विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकले गरेको अनुसन्धानको क्रममा प्लाष्टिक खाने लार्भालाई बढ्दै गएको प्लाष्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्न सकिने देखिएको हो । भुसुनाको लार्भामा गरिएको परीक्षणबाट उनीहरुले प्लाष्टिक खाएर त्यसको रासायनिक संरचना तोड्ने देखिएको वैज्ञानिकको भनाई छ ।
लार्भाले मैनलाई जस्तै प्लाष्टिक पनि पचाउने गरेको अनुसन्धानमा संलग्न क्यामब्रिज विश्वविद्यालयका डा. पाओलो बोमबेल्लीले बताउनुभयो । विश्वमा हरेक वर्ष ८ करोड भन्दा बढी प्लाष्टिक झोला उत्पादन हुने गरेको छ । किनमेल, खाना प्याकिङसहितका अरु विभिन्न कामका लागि प्रयोग गरिने प्लाष्टिक झोला पूर्णरुपमा नष्ट हुनका लागि हजारौं वर्ष लाग्ने गरेको छ । तर लार्भालाई प्रयोग गर्न सकिएमा प्लाष्टिकजन्य फोहोरको केही मात्रामा भएपनि व्यवस्थापन गर्न सकिने डा. बोमबेल्लीले बताउनुभयो ।
क्याटरपिलर सुरुवात हुन सक्ने र यसमा थप अनुसन्धानको खाँचो रहेको उहाँको भनाई छ । क्याटरपिलरको अनुसन्धानले प्लाष्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक उपाय खोज्न पनि सहयोग पुग्ने तर त्यसका लागि विस्तृत अध्ययनको खाँचो रहेको अनुसन्धानमा संलग्न वैज्ञानिकले बताएका छन् ।